Joiwo IP taleefanka leh hawlo badan-News-Ningbo Joiwo caddeyn Qarax Qarax Technology Co., LTD
Joiwo IP telefoonka leh hawlo badan
WAQTIGII: 2019-05-29 HITS: 35
Telefoonka IP-ga ee Joiwo waxaa ka mid ah Telefoonka Biyo-celiska IP / Bamka-caddeynta IP taleefanka / Vandal Resistant IP Phone.
Borotokoolka isku xirka ka dhexeeya shabakadaha IP (Internet Protocol), taasi waa, borotokoolka loogu talagalay isgaarsiinta shabakadaha kumbuyuutarka midba midka kale, iyo taleefanka IP-ga waa habka ugu weyn ee isgaarsiinta ee leh borotokoolka shabakadda IP, iyo dekedda shabakadda (ama WiFi) waa istaraatiijiyada ugu weyn, aalad taleefan oo madaxbanaan oo leh garaacid iyo howlo wicitaan ah, badiyaa waxay ubaahantahay in lagu isticmaalo IPPBX telefoonka ama IMS. Si fudud haddii loo hadlo, waa adeeg gudbinta codka waqtiga tooska ah ee internetka. Waa tikniyoolajiyad cusub oo isgaarsiineed oo internetka u adeegsata gudbinta codka iyadoo dhexdhexaad u ah isgaarsiinta codka.
Waagii hore, taleefanka IP-ka waxaa badanaa lagu adeegsan jiray baraha internetka ee shirkadaha waaweyn. Farsamayaqaannadu waxay isticmaali karaan isla shabakad si ay u bixiyaan macluumaadka iyo adeegyada codka. Fududeynta maaraynta ka sokow, waxay kordhin karaan wax soo saarka. Sababta oo ah qiimaha isgaarsiinta oo hooseeya (khidmada isgaarsiinta internetka oo ah 6 senti boqolkiiba boqolkiiba daqiiqaddiiba, iyo khidmadda isgaarsiinta caalamiga ah ee taleefannada caadiga ah, oo qiimahoodu ka badan yahay toban yuan daqiiqaddiiba), waxaa sidoo kale loo yaqaan taleefoon rakhiis ah.
Maalmahan, suuqa ayaa horay u sameeyay badeecadaha taleefanka IP. Wax soo saarka noocan oo kale ah asal ahaan wuxuu isku daraa taleefanka caadiga ah iyo albaabka codka. Lambarka koontada iyo erayga sirta ah waxaa lagu xaqiijiyey cinwaanka mac-ka ee server-ka qaybta ka ah taleefanka, iyo wicitaanada oo dhan waxaa lagu sameyn karaa fiilada shabakadda. Isla mar ahaantaana, taleefanka gudaha waa bilaash, taleefanka guud ee IP-ga wuxuu leeyahay howlaha soo socda:
1. Protocol Call Call Protocol: Taageerada SIP borotokoolka ama borotokoolka H323,
2. Taageerada cod-bixinta: G.711, G723.1, G.729A,
3, cod cad, QoS dammaanad qaadka codka
4, laqabso deegaanno kala jaad jaad ah oo kala duwan, si dhab ah u gala shaqada NAT
5, taageer borotokoolka PPP / PPPoE, taageeridda garaaca otomatiga ah, shaqada kala-goynta isku-xiridda
6, taageero loogu talagalay DNS, borotokoolka DHCP
7, taageero static, cinwaan IP firfircoon, taageero cinwaanka IP macalin shaqo caqli leh
8, taageerida maareynta websaydhka, Telnet, Qufulka TFTP
9, taageer nambarka transitiinver ee DTMF
10, taageero lambar aqoonsi lambar CID
Joiwo Jail telefoonnada on the Brave oo keliya
Joiwo ayaa soo diray 3,000 oo taleefanno xabsi ah Juun 17